အသက်ကြီးချိန် သွားနဲ့ခံတွင်းဝေဒနာ မရစေချင် – Healthy Life Journal
အသက်ကြီးချိန် သွားနဲ့ခံတွင်းဝေဒနာ မရစေချင်
Q. ကျွန်တော် အသက် ၆၀ ကျော် သက်ကြီးအရွယ်ဖြစ်လို့ ပါးစပ်ထဲက သွားတွေ ယိုင်နဲ့တာ၊ သွားဖုံးတွေ အခြေအနေ မကောင်းတာ၊ သွားဖုံးရိုးတွေ တောင့်တင်းမှု မရှိတော့တာတွေ တွေ့ကြုံမှာ စိုးကြောက်နေပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်လာတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ၊ မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ဆင်ခြင်နေထိုင်ရမလဲ။
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့် ခံတွင်း ခွဲစိတ်ကု ဆရာဝန်ကြီးဖြေကြားပေးပါသည်။
A. မြန်မာလူမျိုးအများစုက ဘယ်လိုယူဆထားသလဲဆိုတော့ အသက်ကြီးလာရင် မျက်စိက မှုန်ရမယ်၊ ခါးက ကိုင်းရမယ်၊ သွားက ယိုင်ရမယ်၊ နဲ့ရမယ်ဆိုပြီး ယူဆထားကြတယ်။ တကယ်တော့ သဘာဝတရားအရ ပြောရရင် သွားဆိုတာ နှစ်စုံပေးထားပါတယ်၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ နှစ်စုံရတာ မရှိပါဘူး။ သွားဆိုတာ ကလေးအရွယ်မှာ ကလေးသွားဆိုပြီး ရတယ်၊ ကလေးအရွယ်နောက်ပိုင်းမှာ လူကြီးသွားဆိုပြီး ရပါတယ်၊ ဒီလို နှစ်စုံရတယ်ဆိုတာ တန်ဖိုး အရမ်းရှိလို့ သဘာဝတရားက လုပ်ပေးတာပါ။
သွားတစ်ချောင်းက အသက် ၆ နှစ်က စထွက်လာတယ်၊ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်မှာ အံဆုံးတွေပါ စုံလာပြီး ပါးစပ်ထဲမှာ သွား ၃၂ ချောင်းရလာပြီဆိုရင် အဲဒီသွားတွေက သေတဲ့အထိ ကြိတ်ဝါးဖို့အတွက် သဘာဝတရားက ပေးထားတာပါ။ ဒီသွားတွေက အသက်ကြီးလာလို့ ယိုင်နဲ့ပြီး ထွက်သွားမယ်ဆိုတာ သဘာဝတရားက လက်ခံထားတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ လူအများစုက လက်ခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ သွားတွေယိုင်နဲ့တာ၊ သွားဖုံးမကောင်းတာတွေ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်သင့်သလဲဆိုရင် သွားပိုးမစားအောင်နဲ့ သွားဖုံးတွေ ကောင်းမွန်နေအောင် ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို ကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ သွားဖုံးတွေ မကောင်းရင်သွားဖုံးတွေက ရောင်လာပြီးတော့ အရိုးတွေပါ ထိခိုက်လာတဲ့အခါ သွားတွေ ယိုင်နဲ့လာမယ်၊ သွားတွေ ကျွတ်ထွက်လာမယ်။ ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေး မကောင်းဘူးဆိုရင် ကျန်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေကို လည်းဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်နေပါမယ်။ ဆီးချိုရောဂါ၊ တခြားနေရာမှာ ကင်ဆာဖြစ်တာ (ပန်ကရိယကင်ဆာ၊ ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ)၊ သားသမီးယူတဲ့အခါ အချိန်မတိုင်မီ မီးဖွားတာ၊ ပေါင်မပြည့်ဘဲ မွေးဖွားတာ စတာတွေက ခံတွင်း ကျန်းမာရေး မကောင်းတာနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာ အခုနောက်ပိုင်းမှာ လေ့လာမှုတွေအရ သိလာကြပါတယ်။ သွားခံတွင်း ကျန်းမာရေးကောင်းတာနဲ့အမျှ တခြားရောဂါဝေဒနာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေကလည်း နည်းသွားပါတယ်။ အဲဒါ ကြောင့် ငယ်ငယ်ကတည်းက သွားနဲ့ ခံတွင်း ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးကို စောင့်ရှောက်ခဲ့ရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် သွားပိုးစားမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ပိုးမစားရင် သွားအကြောထုတ်ဖို့လည်း မလိုပါဘူး၊ သွားတွေက ကောင်းမြဲကောင်းနေမှာပါ။ သွားကို နည်းစနစ်မှန်မှန် တိုက်ပေးတယ်ဆိုရင် သွားဖုံးတွေကလည်း ကောင်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းစားတာ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အရက်သောက်တာတွေကိုလည်း ရှောင်ရပါမယ်။
Related Items:Age, Dental Care, elderly people